Promotion လေးတွေလာပါပြီ…………………………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » Promotion လေးတွေလာပါပြီ………………………….	2
Posted by သျှားသက်မာန် on Jan 9, 2017 in Travel |2comments
ချောင်းသာ (၂ညအိပ် ၃ရက်) ခရီးစဉ်လေးပါ..လူဦးရေ(၂)ယောက်အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်။
ခရီးသွားကာလ – Jan’17 ~ Feb’17
ဈေးနှုန်း – 108000 ကျပ် ✔️ (၁ယောက်ဈေးပါ)
အခန်း – 5*hotel (Deluxe Garden view)✔️
မနက်စာ – စပါယ်ရှယ် ✔️
ညစာ – စပါယ်ရှယ် ✔️
ဟိုတယ် – Akariz hotel (5*)
ဈေးနှုန်း – 179000 ကျပ် ✔️ (၁ယောက်ဈေးပါ)
အခန်း – 5*hotel (Executive Suite Sea view)✔️
ငွေဆောင် (၂ညအိပ် ၃ရက်) ခရီးစဉ်လေးပါ..လူဦးရေ(၂)ယောက်အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်။
ဈေးနှုန်း – 139,000 ကျပ် ✔️ (၁ယောက်ဈေးပါ)
အခန်း – 4*hotel (Ohntaw Villa Garden view)✔️
ညစာ(၁နပ်) – စပါယ်ရှယ် ✔️
ဟိုတယ် – Central hotel (4*)
ဈေးနှုန်း – 155,000 ကျပ် ✔️ (၁ယောက်ဈေးပါ)
အခန်း – 4*hotel (Standard)✔️
ဟိုတယ် – Ocean blue Hotel (4*)
ဈေးနှုန်း – 215,000 ကျပ် ✔️ (၁ယောက်ဈေးပါ)
အခန်း – 4*hotel (Garden Villa)✔️
ဟိုတယ် – Sunny Paradise hotel (4*)
ငပလီ (၂ညအိပ် ၃ရက်) ခရီးစဉ်လေးပါ…လူဦးရေ(၂)ယောက်အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်။
ဈေးနှုန်း – 299,000 ကျပ် ✔️ (၁ယောက်ဈေးပါ)
အခန်း – 3*hotel (Garden View)✔️
ဟိုတယ် – Diamond Ngapali hotel (3*)
ဈေးနှုန်း – 529,000 ကျပ် ✔️ (၁ယောက်ဈေးပါ)
အခန်း – 5*hotel (Deluxe Room)✔️
ဟိုတယ် – Hilton hotel (5*)
Ph : 09421045685
Thint Aye Yeik says: အိုဘယ့် ကြော်ငြာရွာ
Log in to Reply	+1	Was this answer helpful?LikeDislike 4113
Foreign Resident says: Travel Emperor က သမီးရဲ့ Face Book Page လား ။
Travel & Tour အနေနှင့် တခြား Page ရှိသေးလား ။